iLife, efitrano famoronana nataon'i Apple (II): Garageband | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay, ny iray amin'ireo mpiara-miasa amiko nanome anao famerenana feno ny fampiharana iPhoto ary ny vaovao mahaliana rehetra. Ho fanampin'izany, andro lasa izay, namoaka tsikera momba ny sasany amin'ireo rindranasa mandrafitra ihany koa izahay Miasa aho (Pejy, Nomery ary Keynote) na dia mandritra ireo andro ireo aza dia hanana bebe kokoa amin'ireo hevitra ireo ianao ao amin'ny Actualidad iPad ka raha tsy tianao ho diso fotsiny izy ireo mitsidika ny bilaoginay isan'andro na manaraha anay amin'ny media sosialy hahitana raha mamoaka lahatsoratra izahay. Mihevitra ve ianao fa tsy maninona?
Androany dia ho hitantsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ireo fiasa vaovao rehetra izay entin'ilay kinova Garageband vaovao, ny fampiharana faharoa mandrafitra ny suite iLife ho an'ny fitaovana iOS. Garageband, ho an'ireo izay tsy mahalala, dia fampiharana noforonin'i Apple izay ny tanjony dia ny "famoronana" an'i hira nataonay. Manana fitaovana isan-karazany isika izay afaka milalao amin'ny rantsan-tànantsika mba hamoronana hira. Te hahalala ny vaovao rehetra? Mamaky hatrany!
1 Garageband: endrika vaovao, endrika vaovao
2 Manana tombony manokana ireo fitaovana vaovao
3 Fampiasana rindranasa antoko fahatelo hanoratana mozika
4 Fifanarahana Garageband amin'izay vaovao ao amin'ny iOS 7
Garageband: endrika vaovao, endrika vaovao
Ny iray amin'ireo andry fototra amin'ny fampiharana dia ny famolavolana ary, tamin'ny fahatongavan'i OS X Mavericks sy iOS 7, Apple dia nanapa-kevitra ny hanavao ny Garageband hampiditra famolavolana vaovao mifototra amin'ny loko vaovao an'ny fitaovana Apple: toerana mainty miampy volondavenona tsy dia maivana loatra izay mahatonga ny fampiharana manontolo ho kanto kokoa. Heveriko manokana fa Garageband dia nahazo tombony betsaka tamin'ny endriny vaovao. Ho fanampin'izay, ny icono, araka ny hitanao ao amin'ny App Store.
Tsy ny faritra sasany amin'ilay fangatahana ihany no novaina fa koa ny ny rafitra playback sy ny firaketana dia nohavaozina miaraka amin'ny sary masina mendri-piderana sy kely kokoa toa ny iOS 7 ihany koa, noho izany fanavaozana an'i Garageband.
Manana tombony manokana ireo fitaovana vaovao
Fampitaovana Apple vaovao mampiditra ny puce A7 izay mety amin'ny 64 potika ary noho izany dia mahatonga ny fitaovana matanjaka kokoa noho ny teo aloha izay mitondra processeur mora simba kokoa. Ho an'ireo fitaovana vaovao rehetra ireo: iPhone 5C, 5S, iPad Air ary iPad Mini misy fampisehoana Retina, dia nampidirina fiasa vaovao tena mahaliana: hiran'ny lalana 32.
Hatramin'izao dia afaka mamorona hira miaraka amina làlana 16 amin'ny fitaovana rehetra izahay, saingy miaraka amin'ity fanavaozana lalina an'i Garageband ity, ireo mpampiasa manana fitaovana manana chip A7 dia afaka mamorona hira miaraka amin'ny Làlan-tsoratry ny zavamaneno 32... Feo tena anaty, sa tsy izany?
Fampiasana rindranasa antoko fahatelo hanoratana mozika
Ao amin'ny App Store dia misy ny rindranasa hamoronana mozika mahery vaika kokoa noho i Garageband ary mandraka ankehitriny dia tsy afaka namindra mozika mivantana tamin'ny rindranasa iray hafa izahay. Garageband 2 dia manome antsika ny fahafahana manondrana sy manoratra mozika avy amina rindrambaiko iray ampitao ity fampiharana ity izay mandrafitra ny suite famoronana an'i Apple ho an'ny iOS: iLife.
Ho an'ireo mpitia mozika izay manana rindrambaiko mamorona mozika avy amin'ny fitaovany, dia afaka manafatra ny mozika amin'ireo rindranasa ireo ho any Garageband izy ireo amin'ny alàlan'ny rafitra. IOS 7 Inter-App-Audio.
Fifanarahana Garageband amin'izay vaovao ao amin'ny iOS 7
iOS 7 dia natomboka herinandro vitsivitsy lasa izay ary noho izany Garageband dia tsy maintsy nampiditra fiasa vaovao maro mifandraika amin'ity rafitra fiasa ity. Araka ny hitanao raha manana fitaovana vaovao ianao (miaraka amin'ny puce A7), lafo ny fampiharana satria Garageband manohana 64 bit ho fanampin'ny asa hafa mifandraika amin'ny iOS 7 toy ny fampiasana ny AirDrop, ny fiasan'ny rafitra miasa Apple izay ahafahantsika mifanakalo rakitra eo anelanelan'ny iDevices miaraka amin'ny iOS iray ihany. Tsotra ary tena haingana.
Garageband dia milamina maimaim-poana ao amin'ny App Store ho an'ireo fitaovana manaraka miaraka amin'ny iOS 7 (ilaina):
Ary koa, raha te-hisintona ny «rehetratadivavarana»Ary ny hira efa nohavaozin'i Apple dia mandoa fotsiny 4,50 euro avy any Garageband mampiasa ny fiantsenana mitambatra.
Fanazavana fanampiny - iLife, suite famoronana an'i Apple (I): iPhoto
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » iLife, suite famoronana nataon'i Apple (II): Garageband
Inona no tsy maintsy atao amin'ny fananana iOS 7 holazainao ho an'ny kinova vaovao, sa tsy izany? Milaza aminao aho satria maimaim-poana izao ho an'ny iOS rehetra ity fampiharana ity ary tsy mila manana iOS 7 ianao hanararaotra ilay fampiroboroboana vaovao. Ny zava-mitranga dia rehefa "mividy azy" ianao dia hilaza aminao fa mitaky iOS 7 ity kinova ity fa hanome anao safidy hisintona ny kinova farany mifanaraka amin'ny iOS izay ananan'ilay fitaovana ary mazava ho azy fa maimaim-poana koa.
Etsy an-danin'izany, misaotra an'i GarageBand fa mbola manana ny scheumorphism izay toa tsy halain'ny Apple izao.
Ny zavatra tsara momba an'io rehetra io dia raha nividy garageband ianao ary manavao azy ho azy ny zava-drehetra dia voahidy, na dia amin'ny Mac aza, farafaharatsiny nitranga tamiko izany.
Mifanohitra amin'izay ezahinao hazavaina, ny iPhone 5c dia tsy manana ny processeur A7 vaovao.
Marina fa ny 5c dia tsy mampiditra ilay processeur vaovao A7. Slipo kely.